Cabdi Tahliil Warsame - Wikipedia
Cabdi Tahliil Warsame
(Waxaa laga soo toosiyay Tahliil)
Sharaxaad badan iyo faahfaahin fanaaniinta, fiiri Fanaaniinta Soomaaliya.
(1943-05-21) Maajo 21, 1943 ( 77jir)
Hada Ku Nool
Hobolada Waaberi (1970-1998)
Maxamed Cabdi Warsame (Af Ingiriis : Mohamed Abdi Talil; Af carabi: محمدعبذ تهليل) ku magacdheeraa Tahliil, waa fanaan Soomaaliyeed oo aad looga yaqaanno gayiga Soomaalida, kuna caan baxay magaca Cod Wanaagsane sababtoo ah wuxuu ka mid yahay kuwa ugu sareeya fanaaniinta codka fiican dhammaan fanaaniinta ku heesa af-Soomaaliga.
Tahliil heesihiisa aad ayaa loo jeceyahay waana mid ka mid ah fannaaniinta qiimaha mugga weyn ku dhex leh umadda Soomaaliyeed. Fanaanka Maxamed Cabdi Warsame wuxuu uu ku dhashay gobolada dhexe ee Soomaaliya sanadkii 1953dii taariikhda Miilaadiga.
cabdi tahaliil warsamew waxa uu iminka ku xanuun sanayaa magaalada muqdisho.
Fanaanka Cabdi Tahliil.
Fanaanka Maxamed Cabdi Warsame wuxuu leeyahay tiro badan oo heeso ah, kuwaasi oo iskugu jira wadani, jacayl, guubaabin, dhiirigelin, haasaawe, amaan, duco, wacyi, wargelin iyo wax-sheeg.
Fanaankani wuxuu heeso badan la qaaday hobolo dumar oo badan, kuwaasi ooy ka mid yihiin fanaanada Xaliimo Khaliif Magool, Hibo Maxamed Hodoon (Hibo Nuura), Maandeeq, Saynab Cige iyo kuwo kale oo badan. Si kastaba ha ahaatee, heesaha Tahliil aad ayay u badan yihiin, kuwa ugu caansan waxaa ka mid ah:
Heesta Sida Faras Bulaalo
Heesta Jacayl Aayatiin Leh
Heesta Maxaan Xabadeed Ku Nacay (shirkii Djibouti)
fanaaniinta hobolada waaaberi dhaman intoda dhimatay allaha u raxmado iyo inta xanuunsan sida Cabdi tahliil warsame maxamed mooga ma'aha madaadalaha waaberi. khaqiiq ahaan muu ahayn xubin hobaladii waaberi. wuxuu kaqayb qaatay laba riwaayadood oo kaliya oo ay kooxuhu matalayeen. xogtan aad usoo xaqiiji kana saar magaca qaldan ee ah madaalaha funka waxaad kubadashaa aabihii ama adeerkii fanka.
↑ "Tahliil wuxuu uu ku dhashay gobolada dhexe sanadkii 1953dii taariikhda Miilaadiga"
↑ "Tahliil waxuu leeyahay tiro badan oo heeso ah, kuwaasi oo iskugu jira wadani, jacayl, guubaabin, dhiirigelin, haasaawe"
↑ "Heesaha Tahliil iyo Hibo Maxamed Hodoon"
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Cabdi_Tahliil_Warsame&oldid=204309"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 28 Luuliyo 2020, marka ee eheed 06:57.